Muqdisho: Wiil Naafo ah oo intii ay socotay xafladiisa qalin jabinta helay shaqo uu ku taamayey – SOMA: Somali Media Association
Muqdisho: Wiil Naafo ah oo intii ay socotay xafladiisa qalin jabinta helay shaqo uu ku taamayey
Cabdiraxmaan Shuceyb Maxamed oo 30 jir qaba baahiya gaar ah, ayaa muujiyey dadaal xooggan afartii sano ee lasoo dhaafay ee uu dhiganaayey Jaamacadda Himilo ee Muqdisho ku taalla, isagoo ahaa qofka kaliya ee fasalka dhigta ee hadana qaba baahiyo gaar ah.
Cabdiraxmaan oo dhammeystay bartamihii bishaan heerka koowaad ee Jaamacadda, ayaa helay fursad aysan helin saaxibadii la qalin jabiyey, maadaama in la shaqaaleysiiyo ay goobta xafladda qallin jabinta ka dhaceysay, ay ka sheegeen illaa saddex goob, oo laba kamid ah ay tahay kuwa dowladeed, & mid rayid ah, oo ku qanciyey dadaalkiisa.
Waxa uu sheegay in uusan marnaba filaneynin, shaqadaan uu hadda ka helay, Bank-ga Premier Bank, oo kamid ahayd kuwii u sameeyey ballanqaadka shaqaaleysiinta, balse uu isaga doortay tani.
Cabdiraxmaan ayaa hadda aaminsan in tani ay u tahay bilow u wanaagsan noloshiisa, oo ay waxbadan ka baddeli doonto, sidoo kalana uu rajeynayo in mushaarkiisa ku caawiyo Hooyadiis si looga bixiyo waxbarashada carruurta isaga la dhashay, dugsiyada & Iskuullada aada.
“Wallahi All xamdu Lillah horta aniga qalin jabinta markaan u imaanaaye koleytoole aniga waan iska soo istiqaareyste, Illahayaan iska soo baryey, Jaamacadda markaan imaadayna koleytoo farxadaasa wax walba iga wayneyd, farxadi anigo heystaa waxaan sii helay farxad kale oo seddex shaqaa la ii balan qaaday labo shaqo Dowlada ah iyo shaqo kanbani Premier Bangi la dhaho , marka shaqooyinkaas la ii balan qaade farxadeyda way sii laba jibaarante msha Allah.”
Cabdiraxmaan Shuceyb oo dhameystay kulliyadda Xisaabaadka ee Jaamacadda Himilo ayaan ku dhalan naafanimadaan, balse isaga oo jira Sideed sano ayey xabad wiifta ah kaga dhacday lugaha isaga oo xilligaa joogay Dugsi Qur’aan ku yaallay degmada Dharkeenley ee Muqdisho oo uu Qur’aanka ka baranaayey.
Waxa uu sheegayaa in la gayeeyey dhowr isbitaal, laakin markii dambe lagu wargaliyey in aan waxba laga qaban Karin xaaladiisa caafimaad, balse taas kama reebin inuu sii wado waxbarashadiisa, maadaama ay Hooyadii u sheegi jirtay markasta in ay tahay mid uu ku gaari karo heerka uu rabo, isaga uu ka qaaday dhiirannaan badan.
Uma sahlanayn inuu heerkan soo gaaro isagoo aan addimadiisa ku socon karin, isla markaana aan haysan gaariga ay kaashadaan dadka naafada ah, maaddaama uu ka dhashay qoys sabool ah. Wuxuu u dhabar adaygay waxbarashadiisii heerarka kala duwan ee iskuulka iyo afartii sano ee jaamacadda. Maalmaha qaar oo ay xiran yihiin waddooyinka Muqdisho, gaadiidka dadweynahana aanu shaqeyneyn wuxuu muddo dhowr saac ah u gurguuran jiray jaamacadda.
“Wallahi xay ahaytoo dhiirigaliyahayga ugu wayn waxuu ahaa hooyadey macaan oo Marna saaxibo aan ahayn, marwalba oo culeys igu imaado idhihi jirtay bal wax barashadda haka caajisin waa mida kaliye ku anfici doonta mustaqbalka Aad ku noqon doontid qof wayn oo miisaaniyad leh, maya Wallahi naafanimada kuma dhalan ee aniga oo yar da’aadaan siddeeda sano jiro ayey xabad igu dhacday waliba xabada markay igu dhaceyse layaab laheed waayo dugsi Qur’aan joogay iyadoo xitaa ardeyda aan ku dhex jiro ayey kaligey iga asiibtay All xamdu lillahi waa qadar Rabbi. ”
Dhibaatooyinka uu soo maray Cabdiraxmaan waxa uu hadda ku hilmaamayaa inuu gaaray mid ka mid ah himilooyinkiisii. Waa riyo dad badan oo baahiyaha gaarka ah qaba aan u suuragelin, isaga oo hadda rajeynaya in uu sii wato waxbarashadiisa heerarka xiga ee Jaamacadda.
Wuxuu sheegay in macallimiinta iyo ardayda ay ku dhiirrigelin jireen waxbarashadiisa. Wuxuu ahaa arday fahmad badan oo mar walba aan hoos uga dhicin kaalmaha hore marka la shaaciyo natiijada imtixaannada.
Cabdiraxmaan Shuceyb ayaa kula talinaya dadka qaba baahiyaha gaarka ah in aysan is dhigan, oo ay qaban wixii ay qabtaan kuwa lixaadkooda dhammeystiran yahay, balse markasta muhiim ay tahay inuu qofka ku dadaalo horumarinta waxbarashada, oo nolol cusub u horseedi karta.
Waxbarashada iyo dadaalka uu muujiyay Cabdiraxmaan ayaa dhiirrigelin u noqon kara qof walba. Wuxuu sheegay in hadafkiisa xiga uu yahay dhismaha ururro isu keena dadka baahiyaha gaarka ah qaba, kana shaqeeya danahooda iyo horumarinta xirfadaha dadka naafadaha ah.
“Ummadaan ay ku dhex noolyihiin wax ay dheeryihiin maleh, ninkaan meeshuu orod ku tago adigoo tartiibtaada u socdaa tagi doonta, waxuu qabto inaa qabatid waliba labba jibaar inaa qabatid, waxaan jeclaan lahaa hadaa tihiin dadka baahiyaha gaarka qabo oo aniga ila midka ah marka waxbarta , dadka naafada ah oo aniga ila midka ah inaan caawiyo oo waliba dhinac walba ka saacido.”
WQ: Faruun Axmed oo ka tirsan Radio Star Fm.
Baledweyn: Haween isu tagay oo dhallinyarada ka caawiya lacagaha ku baxa guurkooda
BALEDWEYN: Qoysas barakaca ah oo lacago isku darsada si ay guri u dhistaan
Beledweyn:- Dhallinyarada kasoo baxay Jaamacadaha oo farsamada gacanta baranaya si…
Wanlaweyn:- Carruur da’da waxbasho dhaafay oo helay fursado waxbarasho oo bilaash ah
Beledweyn:- Dhallinyarada kasoo baxay Jaamacadaha oo…